Ubungcali obuphezulu be-15 bokugula ngokungapheliyo kwaBafundi 2022
Esi sithuba sinikezela ngolwazi oluhlaziyiweyo malunga nezifundo ezingapheliyo zokugula kwabafundi abafuna ukuqhubela phambili imfundo yabo kumaziko aphakamileyo. Amabhaso emali aya kunceda aba bafundi ekuzinziseni izifundo kunye nezinye iifizi.
Kukho iindidi ngeendidi zemifundaze kukho izinto ezithile ezinje ngezifundo zokufundela abafundi abanomhlaza, izifundiswa ze-autism, kunye nokunye ukugula / ukukhubazeka kwabafundi.
Eli nqaku limalunga nokufunda okungaginyisi mathe kwabafundi, oko kukuthi, ngabafundi kuphela abaphila nesifo esaziwa njengesigulo esingapheliyo abanokufaka isicelo solu hlobo lokufunda.
Uzazi njani izifo ezinganyangekiyo?
Isigulo okanye ukugula kufakwa kwinto enganyangekiyo xa siqhubeka okanye sihlala ixesha elide. Isigulo esithi “esinganyangekiyo” sihlala sisetyenziswa kwisigulo esihlala ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Izifo ezondeleyo zezi:
Isifo esinganyangekiyo semiphunga
Ukuphazamiseka kwemfuza kunye
Ukufumana isifo sokunqongophala komzimba
Ezi zizigulo ezingapheliyo kwaye ukuba unayo enye yezi zinto zichazwe apha ngasentla, emva koko ungafaka isicelo sokufunda esidweliswe ngezantsi. Kwaye ukuba awunayo okanye umntu ophilileyo ngokugqibeleleyo, ke bonisa eli nqaku kwisihlobo, umhlobo, okanye ummelwane ocinga ukuba unesifo kuyo nayiphi na le micimbi yezempilo.
Injongo yeli nqaku kukubonisa aba bantu banesifo esinganyangekiyo ukuba baninzi abantu phaya abaxhasa amaphupha abo emfundo ngokubonelela ngezifundo. Iziseko zesisa, imibutho kunye nabantu abanesisa bazimisele ukubakhuthaza ngokuxhasa iinjongo zabo zemfundo kunye nomsebenzi.
Thina kwiSifundo saMazwe aManye amazwe siye saphanda ngezi bhasari kwaye sizenza lula kwiwebhusayithi yethu ukubenza bafikeleleke ngokulula kwaye baqondakale kwabo bayifunayo. Ngale ndlela, siza kuba negalelo ekuxhaseni nasekukhuthazeni aba bantu bahlala nesifo esinganyangekiyo okanye esinye.
Ke, ukuba unengxaki yezempilo engapheliyo kwaye usafuna ukulandela iinjongo zakho zemfundo ungasayenza loo nto, izifundiswa apha zenzelwe ngokukodwa ukuxhasa abantu abafana nawe. Zonke izibonelelo zokufunda apha zinikezelwa ngexabiso lemali eliya kuthi lisetyenziselwe ukucima ukufundiswa kwakho kunye nezinye iifizi.
Ngaphandle kokuqhubela phambili, makhe sifunde ngezi zifundo zokugula okungapheliyo kunye nendlela onokuthi uziphumelele ngayo.
1 Ukufundela ukugula okungapheliyo kwabafundi
1.1 UAnderson kunye noStowell Scholarship
1.2 I-AbbVie Cystic Fibrosis (CF) iScholarship
1.3 Umhlaza kwiKholeji Scholarship
1.4 INgxowa-mali yoMsindisi Yomhlaza
1.5 Ingxowa mali kaCandice yeSickle Cell
1.6 Iswekile yeScholars Foundation Scholarship
1.7 UJack noJulie Narcolepsy Scholarship
1.8 Abafundi abaneSiseko seSiseko seNtliziyo
1.9 Esi sisiseko seSiseko seScholarship
1.10 Isiseko seSizwe seCancergiate Cancer Foundation (NCCF)
1.12 I ngcebiso
Ukufundela ukugula okungapheliyo kwabafundi
Oku kulandelayo kukufunda okwenzelwe ngokukodwa abantu abaneemeko zempilo ezingapheliyo:
I-AbbVie Cystic Fibrosis (CF) iScholarship
Umhlaza kwiKholeji Scholarship
INgxowa-mali yoMsindisi Yomhlaza
Ingxowa mali kaCandice yeSickle Cell
Iswekile yeScholars Foundation Scholarship
UJack noJulie Narcolepsy Scholarship
Abafundi abaneSiseko seSiseko seNtliziyo
Isiseko seSizwe seCancergiate Cancer Foundation (NCCF)
Esi sesinye sezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi abakwikholeji kwaye bahlala nesigulo somzimba, isifo somzimba, kunye / okanye ukukhubazeka komzimba. Abafakizicelo kufuneka babhalise ngokusisigxina okanye kwinkqubo yexeshana kwikholeji eyamkelweyo kwaye akufuneki babekho kuvavanyo lwezifundo.
Ubungqina be-imeyile yobhaliso kwi-Bella Soul, okubhaliweyo akufuneki nokuba yi-GPA kodwa kuya kuthathelwa ingqalelo. Gcwalisa igama lakho, unyaka, i-GPA, iyunivesithi, kunye nezifo / ukuphazamiseka kunye ne-imeyile sstrader@wisc.edu.
Abafakizicelo kufuneka babhale iphepha elinamaphepha amabini elinamacala amabini malunga nokuhla kunye nokuhla kokuphila nesifo esinganyangekiyo. Kwisincoko sakho, faka iimpendulo zale mibuzo ilandelayo: “Ungamcebisa uthini umntu onengxaki yokugula okanye ingxaki efanayo? “Zeziphi ezinye iindlela ezikunceda ukuba uqhubele phambili kwaye uphile ubomi obunempilo ngokwasemzimbeni nangokomzimba?
Inkxaso mali yokufunda inikezelwa nguBella Soul, umbutho wesisa kawonkewonke osekwe uxhobisa abafundi abajamelene nesifo esinganyangekiyo, ukukhubazeka komzimba, kunye nezifo ngokufunda kunye nenkxaso yeemvakalelo.
Isixa semali yokufunda yi- $ 400 kwaye kufanelekile ngo-Agasti 30, 2021.
ICystic Fibrosis (CF) sisifo esinganyangekiyo esichaphazela amadlala omzimba, ukubila amadlala, inkqubo yokuzala, inkqubo yokuphefumla kunye nokwetyisa abantwana kunye nabantu abadala abancinci. Kuba sixoxa ngezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi, oku kufanele ukuba kukhankanywe kwaye kuncedwe abantu abaphila nawo kwimfundo yabo.
I-AbbVie Inc., isiseko sesisa, saseka inkqubo ye-AbbVie CF Scholarship ukunceda abantu abalwa nesigulo esinika ithuba lokuphumelela ukuya kuthi ga kwi-25,000 yeedola ukulandela imfundo ephezulu. Isifundi se- $ 25,000 sinikezelwa kwizifundiswa ezingama-40, oko kukuthi, i $ 3,000 nganye kwizifundo ezimbini eziphumeleleyo zinikwa izibonelelo zokufumana i- $ 22,000 eyongezelelweyo.
Umfaki-sicelo kufuneka abhalise kwinkqubo yesidanga sokuqala okanye isidanga kwiziko elisemthethweni e-United States kwaye kufuneka abe ngummi okanye umhlali osisigxina. Isicelo senziwa kwi-Intanethi okanye ngeposi ngokugcwalisa isicelo kunye nokuthumela isincoko, uluhlu lwezinto ezifeziweyo kunye nenkcazo-ntetho yoyilo.
Umhla wokugqibela wokufunda ngu-Epreli 30, 2021. Faka isicelo ngoku
Umhlaza sesinye isifo esoyikekayo, esinganyangekiyo esenza ukuba le nxalenye yoluhlu lwethu lwezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi. Umhlaza weKholeji unceda abo basinde kumhlaza ukuba baphumelele kwikholeji nangaphaya ngokubabonelela ngezifundo kunye nolunye uncedo lwezezimali.
Abafundi ngoku abaphila nomhlaza banokufaka isicelo sokufunda kwaye banokucela ukongezwa kwexesha elinye lokufunda kwabo ukuba banengxaki enxulumene nempilo ebanyanzela ukuba bashiye isikolo. Ibhaso yi- $ 5,000 kwaye abafaki-zicelo kufuneka babhalise kwiyunivesithi okanye kwikholeji eyamkelweyo ukuze bayifumane.
Amanye amaxwebhu esicelo yile minyaka mibini idlulileyo yokubhalwa kwezemfundo, ubungqina bencwadi yokufumanisa isifo, ileta yengcebiso evela kumntu omnye ngaphandle kosapho lwakho, kunye namaphepha amabini okuqala eerhafu ezifanelekileyo ze-2019 (oku kungatshintsha unyaka olandelayo).
I-Cancer ye-College Scholarship inikezelwa rhoqo ngonyaka, ukuba uphoswa ngunyaka wangoku unokulinda ukufaka isicelo sonyaka olandelayo.
Esi sesinye isifundi sabasindileyo bomhlaza nakwizigulana ezinomhlaza ngoku ezingafumani nyango. Umfaki-sicelo kufuneka abhalise okanye amkelwe ukuze abhalise kwinkqubo yesidanga sokuqala kwisikolo esivunyiweyo.
Umamkeli ofundayo makangenise ikopi yeleta yokwamkelwa evela kwikholeji / eyunivesithi abazikhethele yona okanye ileta yokuma okuhle evela kumbhalisi. Iileta ezimbini zokucebisa, ukuxilongwa kwezonyango, kunye nesincoko ngesihloko esithi: "Ngaba amava am ngomhlaza abuchaphazele njani ubomi bam kunye neenjongo zomsebenzi" kufuneka zingeniswe.
Isincoko kufuneka okungenani sibe namagama angama-500 kunye namagama ayi-1200 ubuninzi.
Iseli yokugula kukuphazamiseka kwemfuza kwaye ngokubanzi, ingxaki yezempilo engapheliyo, yiyo loo nto kudwelisiwe kuluhlu lwethu lwezifundo zokugula okungapheliyo. Le nkxaso-mali inikezelwa kathathu okanye nangaphezulu rhoqo ngonyaka kubafundi abanengxaki yokugula kweselfowuni kwaye bafuna ukulandela imfundo ephezulu.
Abafakizicelo kufuneka bamkelwe okanye malunga nokwamkelwa kwiziko eligunyazisiweyo lasesekondari. Abamkeli bemfundo yokufunda bayakhethwa ngokusekwe kwimfundo ephezulu kunye nokuzibandakanya kwimisebenzi yangaphandle kunye nenkonzo yoluntu.
Iileta ezimbini ekubhekiswa kuzo ziyafuneka kwisicelo kunye nesincoko samagama angama-250 esifakwe kwifomathi enamacala amabini achaza indlela iseli erhengayo ebuchaphazele ngayo ubomi babo kunye nemfundo, iinjongo zabo zemfundo, indlela olindele ukuyiphumeza ngayo, kwaye ngubani umntu obenegalelo kubo ubomi ukubanceda banyamezele.
Khuphela ifom yesicelo apha.
Isifo seswekile sisifo esinganyangekiyo kwaye iSiseko seSwekile Scholars Foundation sikubone kufanelekile ukubonelela ngezifundo kubantu abaphila nesi sifo kwaye basafuna ukuqhubekeka nezifundo zabo kwiziko eliphezulu.
Ukuqwalaselwa kwesi sibonelelo sokufunda kufuneka ube uhlala nohlobo 1 lweswekile, ube kwisikolo samabanga aphakamileyo ofuna ukuqhubela phambili imfundo yabo kwiziko elivunyiweyo leminyaka emibini okanye emine emva kwesekondari oku kubandakanya iyunivesithi, ikholeji, ezobugcisa, okanye isikolo sezorhwebo.
Kuphela ngabemi baseMelika kunye nabahlali abasisigxina abavunyelwe ukuba bafake izicelo, kwaye isicelo senziwa kwi-Intanethi Apha. Isicelo sivala ngo-Epreli 6, 2021.
I-Narcolepsy kunye ne-Idiopathic Hypersomnia zizifo ezingapheliyo ezinxulumene nokulala kwaye sisifo esinqabileyo kakhulu. UJack noJulie Narcolepsy Scholarship bebeqhubeka minyaka le kule minyaka isixhenxe idlulileyo kwaye lo ingomnye unyaka wokuba ufake isicelo kwaye uphumelele isifundi.
Amabhaso okubhalwa kwemali yokufunda eyi-1,000 ukuya kwi-25 yabafundi abafunyaniswe ukuba bane-Narcolepsy okanye i-Idiopathic Hypersomnia baceba ukuya kwikholeji yeminyaka emine okanye eyunivesithi. Ke ngexesha lokufaka isicelo, uya kuba sisikolo esiphakamileyo eUnited States.
Amanye amaxwebhu afunekayo kwisicelo yile:
Isincoko esinamagama angama-500 ukuya kwayi-1000 ngesihloko: “Ukuba ungabuyela umva ngexesha uthethe wedwa ngomhla wokufunyanwa kwakho, ungathini? Leliphi icebiso okanye umbono oza kwabelana ngalo nomntu omncinci kuwe?
Uluhlu lwayo yonke imisebenzi yakho yangaphandle
Ukubhalwa ngokusemthethweni kwamabakala kwisemester esandula kugqitywa
Iziphumo zovavanyo lwe-ACT okanye ze-SAT
Ingxelo esayiniweyo yokuqinisekisa uxilongo kwi-neurologist
Ifoto yomzobo wakho.
Esi sesinye sezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi abanesifo sentliziyo. Le ngxowa-mali ibonelelwa minyaka le kwaye ukuba ummkeli ugcina iimfuno eziyimfuneko inokuhlaziywa rhoqo ngonyaka.
Abafakizicelo kufuneka babhalise okwangoku okanye kwinkqubo yokubhaliswa kwiyunivesithi okanye kwikholeji eyamkelweyo ukuze baqhubeke nesidanga sokuqala okanye isidanga. Ukuba ungowokugqibela, kuya kufuneka unikeze ileta yokwamkelwa, ishedyuli esemthethweni yesemester yabo yokuqala, kunye nokubhalwa kwesikolo esiphakamileyo.
Abafaki zicelo kufuneka babe ne-CGPA ye-3.0, bafumane ukuxilongwa kwemiba yentliziyo evela kugqirha onelayisensi, ileta yesindululo, ingxelo yobuqu engekho ngaphezu kwamagama angama-2,000 500, kwaye kungabikho ngaphantsi kwamagama angama-XNUMX achaza imiqobo ekufuneka uyoyisile ngenxa ukuba nemicimbi yentliziyo.
Isicelo sivuliwe kuphela kubemi baseMelika, kubemi, nakwabahlali abasisigxina.
Esi sesinye sezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi ngoku abanengxaki yokufumana okanye ababefumene kwakhona kwiAlopecia. Abafakizicelo kufuneka babe ngabantu abadala kwizikolo eziphakamileyo kwiminyaka yabo yokugqibela kwaye bafuna ukulandela imfundo ephezulu kwiziko elamkelweyo eMelika.
Isiteyitimenti esichaza amava akho ngokuba nealopecia, akukho magama aphezulu okanye ubuncinci obufunekayo.
I-NCCF yadalelwa ukuxhasa kunye nokubonelela ngeenkonzo kulutsha olunobomi babo buchatshazelwe ngumhlaza kwaye baqhubekile nemfundo yabo ngonyango okanye emva konyango lwabo. Isifundi ngumvuzo oyi- $ 1,000 esetyenziselwa ukucima izifundo zomamkeli kunye nezinye iifizi.
Ukuphumelela ibhaso, kuya kufuneka uhlangabeze ezi mfuno zilandelayo:
Umfaki-sicelo kufuneka abe ulixhoba lomhlaza okanye umguli wangoku.
Ubudala obufunekayo buneminyaka eyi-18-35 ubudala kodwa kuya kwenziwa okwahlukileyo ukuba uneminyaka eli-17 ubudala kwaye ungena kwikholeji ekwindla emva kwesicelo
Kufuneka ube ngummi okanye umhlali osisigxina eUnited States
Ubhalisile okanye ucwangcise ukubhalisa kwikholeji eyamkelweyo, eyunivesithi, okanye iziko lokufundela ukulandela inkqubo yesidanga sokuqala okanye isidanga.
Umfaki-sicelo uya kuvavanywa ngokusekwe kumgangatho wesincoko, isidingo semali, ibali elipheleleyo lokusinda komhlaza, ukuzibophelela kwimfundo, umgangatho wezindululo, kunye nokubonisa imeko ethi "Uya kuphumelela" ngokubhekisele kumava akho omhlaza.
Oku kuzisa isiphelo kweli nqaku malunga nezifundo zokugula ezingapheliyo zabafundi, yiya kwiimfuno zokufunda kunye neendlela zokufaneleka ngononophelo ukunqanda iimpazamo. Ungaqhubeka nokufaka isicelo sokufunda ngaphezulu kwesibini kwezifundo zidweliswe apha ukwandisa amathuba okuphumelela ubuncinci kwezi zifundo.
Faka isicelo kwangoko ukuze isicelo sakho siphinde siqwalaselwe kwangoko kwaye ukuba singasebenzi ungafaka isicelo sesinye.
Ukongeza, unokufaka isicelo semfundo yesiqhelo kunye nokunyusa amathuba akho okuphumelela isifundi. Unokufumana ezinye zezi nkxaso-mali kwicandelo lokucebisa elingezantsi:
Scholarship Postgraduate Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Ngaphantsi kweeSchoolships
Izifundo ezingapheliyo zokufunda zabafundi
Post Previous:Iikhosi eziphambili ze-21 zeKhosi kunye neZikolo eDubai ezineSatifikethi
Okulandelayo Post:Ubungcali obuphezulu be-13 kubafundi ababuya